आलोचना सुन्न पनि मुटु चाहिन्छ - sambahak
Home विचार आलोचना सुन्न पनि मुटु चाहिन्छ
आलोचना सुन्न पनि मुटु चाहिन्छ
प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा सरकारका राम्रा कामका बारेमा लेख्ने, प्रकाशन गर्ने र प्रशारण गर्ने मुटु भएका सम्पादक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सरकारका राम्रा कामको प्रशारण गर्ने टेलिभिजन, रेडियो र पत्रपत्रिका समेत नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँको टिप्पणी र गुनासोपछि नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुमा एक खालको तरंग उत्पन्न भएको छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा विभिन्न खाले टिका टिप्पणीहरु हुन थालेका छन ।
संसारमा पत्रकारितालाई आवाज विहिनको आवाजको रुपमा लिईन्छ । जसको मूल मर्म हो, सरकारले नदेखेका, नसुनेका नागरिकहरुको आवाज बनेर काम गर्नु । यसको अर्थ हो राज्य सत्ताबाट पिछिडिएका, राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका उत्पीडनमा परेका आम नागरिकको आवाजलाई सरकार समक्ष पु¥याउने माध्यमका रुपमा सञ्चार जगतलाई लिईन्छ । त्यसैगरी राज्यले गरेका राम्रा कामका अलावा ती राम्रा काम भित्रका पनि विसंगती विकृतिलाई सार्वजनिक गरेर सरकारलाई सुध्रिने र सच्चिने मौका दिने काम आमसञ्चारमाध्यमहरुले गर्दै आइरहेका छन ।
समाजमा भएका सामाजिक विकृति र विसंगती, कुप्रथा र कुरितीहरुको विरुद्धपनि सञ्चारमाध्यमहरुले लगातार कलम चलाउँदैं आएका छन । सञ्चारमाध्यमहरुले समाजको त्यस्तो ऐनाको रुपमा काम गरिरहेको हुन्छ, जुन ऐनामा जसले हे¥यो उसले उ भित्रको विकृति र विसंगतीहरुलाई स्पष्टसँग देखाउने गर्दछ ।
नयाँ संविधान निर्माणसँगै निर्वाचन भएर ओली सरकार गठन भएको करिव दुई वितिसकेको छ । नेपालको राजनैतिक ईतिहासमा २०१५ सालमा गठन भएको वि पि कोईराला नेतृत्वको सरकारपछि सर्वशक्तिशाली सरकार हो ‘ओली सरकार’ । ओली सरकार आफैंमा अत्याधिक बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) (तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता पछि बनेको दल)का अध्यक्ष समेत हुन । ओली सरकारमा समाजवादी दल समेत सामेल भएपछि दुई हिताई कै सरकार बन्यो । केन्द्रमा नेकपा नेतृत्वको दुई तिहाईको सरकार, सात मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपा कै दुई तिहाईको सरकार, ७५३ स्थानीय तहमध्ये झण्डै दुई तिहाई स्थानीय तहमा नेकपा कै नेतृत्व ।
यस्तो सुवर्ण असरमा भविष्यमा कुनै दललाई मिल्ला या नमिल्ला यो राजनैतिक आंकलन गर्न सकिने अवस्था नभएपनि ओली सरकार गठनपछि जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको’, पानीजहाज, रेलका नाराले जनतामा एक हदसम्म परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका भ्रष्टाचार निवारण गर्ने प्रतिवद्धताले जनतामा ठूलो आशाको सञ्चार भएको थियो । तर यो दुई वर्षमा भ्रष्टाचार कति कम भयो सरकारले हेक्का राखेको छ की छैन ? पछिल्लो समयको यती काण्ड के हो ? के नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति भाडामा लिन सक्ने नेपालमा अरु कुनै व्यापारिक समूह छैन ? के यतीसँग प्रधानमन्त्रीको साइनोको प्रभाव होईन नेपाल ट्रष्टको जग्गा प्रकरण ? यसको सत्य तथ्य बोल्न सक्ने मुटु प्रधानमन्त्रीसँग छ ?
भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ ? यसको उत्तर अरुले दिनु पर्दैन। हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको प्रतिवेदन मात्र हेरे पुग्छ । ‘सिंहदरवार गाउँ गाउँमा’ भन्ने नारा बोकेर जनतामा गएको तत्कालिन वाम गठबन्धनको नारा ‘सिंहदरवारको भ्रष्टाचार गाउँ गाउँमा’ परिणत भएको छ । स्थानीय तहमा मौलाएको भ्रष्टाचारलाई रोक्ने संयन्त्र नै देखिँदैन । भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुनी कारवाहीबाट छल्न हरेक निर्णयलाई मन्त्री परिषदबाट गराएर नीतिगत निर्णयको परिभाषाभित्र पार्न खोजिएको छ । व्यक्ति व्यक्तिका फाईदाको हिसाव कितावमा मन्त्री परिषदका निर्णय भएका छन ।
एनसेलको कर सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा पु¥याएको छ । अदालतले जुन ढंगले कर घटाउने निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णय गर्ने न्यायाधिश माथि खोई सरकारको प्रतिक्रिया । त्यो मुद्दामा एनसेलले राहत पाउने भन्दा पनि सरकार पराजित भएको मुख्य मुद्दा हो की होईन ? तर सरकार यस विषयमा चूँ सम्म गरेको सुन्नमा आएको छैन । अर्बौ कर गुमेको अवस्था छ ।
अरु धेरै विषय र टाढा जानु पर्दैन । एक महिना अघि शुरु भएको संसदको हिँउदे अधिवेशन मात्र हेरे पुग्छ । संसद एक महिना देखी बन्धक छ कस्को कारण ले ? प्रमुख प्रतिपक्ष विचरा आफ्नै आन्तरिक विवादले थिलथिलो अवस्थामा छ । उ सरकारको विरोध गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । संसारमा संसदको बैठक प्रतिपक्षको अवरोधका कारण हुन्छ । तर नेपालको दुर्भाग्य सरकारको निर्णय असक्षमताले संसद बन्धक बनेको छ । तपाईंका स्वार्थले जनताको आवाज प्रतिविम्व हुने थलो गुमराहमा छ । यो सत्य सुन्न सक्ने मुटु छ प्रधानमन्त्रीसँग छ ।
संसदमा पेश भएका विधेयकहरु एक पछि अर्को विवादमा छ । प्रधानमन्त्री र उहाँका आसेपासे भन्छन विपक्षीले अनाहका विरोध गरे । के उनीहरुले विरोध गर्दैमा विधेयक संसदबाट पास नहुने अवस्था छ ? छैन तरपनि किन विरोध हुन्छ त ? प्रधानमन्त्रीले भन्नु होला विरोध गर्नु प्रतिपक्षको धर्म हो काम हो । हो प्रतिपक्षको काम विरोध गर्नु हो । के प्रतिपक्षले विना आधार विरोध गरेका छन त ? यतातर्फ एक पटक सोच्ने फुर्सद समेत प्रधानमन्त्रीसँग छैन । के विधेयकका सरोकारवाला सबै तपाईंका विराधी मात्रै हुन त ? अवश्य पनि होईन । के विपक्षीको एकसाहटमा मात्रै गुठी विधेकको विरोधमा माईतीघरमा जनलहर उर्लेको निष्कर्ष सरकार को हो त ?
सरकारले निक्कै तामझामका साथ शुरु गरेका अर्को दुई योजना हो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा कोष । सरकारले गर्न खोजोका केही राम्रा काम भित्र पर्छन यी दुई योजना । तर कार्यान्वयनको अवस्था हेर्नुहोस कस्तो छ ?
युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगार दिएर विदेश पलायनबाट रोक्ने र बेरोजगार अन्त्य गर्ने उद्देश्यले एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा शुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रोजगारका लागि छनोट भएका उम्मेदवारहरुलाई हेर्नुस कस्तो छ ? छनोटमा पार्टीका कार्यकर्ता त पर्ने नै भए । त्यस्मा पनि युवा बेरोजगार भन्दा पनि गृहिणी, अवकाश प्राप्त कर्मचारी, व्यवसायी र स्वरोजगार गरिरहेकाहरुको भिड छ । कस्तो योजनामा लगानी भएको छ त्यो पनि हेरौं । राज्यको अर्बौ ऋण सडकको झार उखेल्ने, पार्क सफा गर्ने, सडकका नाली खोल्ने जस्ता काममा बढी खर्च भएको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, ‘अब बेरोजगारले रोजगारको लागि भौंतारिनु पर्दैन, रोजगार आफैं बेरोजगार खोज्दै घरघरमा आउँछन । कोही युवा विदेश जानु पर्दैन ।’ तर तथ्य हेर्नुहोस सरकारका श्रम मन्त्री वैदेशिक रोजगार नयाँ नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजीमा छन । नयाँ नयाँ मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्दैछन ।
शुरु भएको एक वर्ष नबित्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसको लागि कोष सञ्चालनमा ल्याएको हो उनीहरु नै कोषमा आउन अनिच्छुक देखिएका छन ।
प्रधानमन्त्रीले सोच्नु भएको होला, उहाँका आसेपासेले पनि राम्रैसँग सुनाए होला, कि सरकारले वाह क्या राम्रा काम गरिरहेको छ । हो तपाईले केही राम्रा काम गर्ने कसरत गर्नुभएको छ । सबैले त्यसको तारिफ पनि गरेका छन । तर ती कामको गति कति छ, कस्तो छ प्रधानमन्त्रीले हेक्का राख्न सक्नु भएको छैन वा उहाँका आसेपासेले त्यसको सही सूचना र तथ्यांक दिईरहेको छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सञ्चारमाध्यममा आएका खबरलाई नकारात्मकरुपमा ग्रहण गर्नुभयो । अनि भन्नुभयो, ‘सरकारका राम्रा कामको बारेमा लेख्ने मुटु भएका सम्पादक छैन ।’
जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको गुनासो सरकारका राम्रा कामको प्रचार प्रसार भन्दा पनि सरकारका कामका गुनगान नगाएकोमा हुनुपर्छ । सञ्चारमाध्यमहरुले सरकारको भजन नगाएकोमा उहाँको गुनासो हुन सक्दछ । हो, सम्पादकहरुमा प्रधानमन्त्रीले भने झैं मुटु नभएकै हो किनकी मुटु हुँदो हो त सम्पादकहरुले पनि प्रधानमन्त्रीका भजन मण्डलीले जस्तो सरकारको भजन मात्र गाउँथ्यो होला । तर प्रधानमन्त्रीले एउटा कुराको हेक्का राख्न सक्नुभएन । राम्रा कामको प्रचार प्रसार र गुनगान सुन्न भन्दा आलोचना सुन्न र देख्न पनि ठूलो छाती र मुटु चाहिन्छ ।
साभार ः न्यूज अफ साप्ताहिक
Previous articleभक्तपुरको महांकालचोकमा मोटरसाईकल दुर्घटना एकको मृत्यु
Next articleपोखरामा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मार्शल आर्टस हाप्किडो सेमिनार २०२० हुने
नोबल कोरोना भाइरसको आतंक चीन देखि मन सम्म
देश रुँदा पनि नेपाली नीरो बासुरी बजाइरहेछन्
के हो मिनिलियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ?
नेपालमा फाँसीवादको उदय
पूँजीवादी निर्वाचनबाट समाजवाद नआउने